Taona Vaovao: Jeritodika Amin’ilay Firariantsoa Mizara Roa Tao Rosia · Global Voices teny Malagasy
Taona Vaovao: Jeritodika Amin'ilay Firariantsoa Mizara Roa Tao Rosia
Voadika ny 19 Janoary 2014 22:17 GMT
Fiarahabana Taona Vaovao nataon'i Putin, miaraka amin'ny toraka saka. Sary tsy misy anaran'ny tompony ifampizaràna ety anaty aterineto.
Rehefa vitan'i Rosia ny fankalazàna ny Taona Vaovao tamin'ny fomba taloha (fomba fanao izay nipoitra avy amin'ny fifanjevoan'ny tetiandro tany ampiandohan'ny taonjato faha-20), dia miverina manao jeritodika ny fomba nandraisan'ireo Rosiana mpisera tamin'ny 31 Desambra 2013 kosa isika, rehefa nampian'ny Filoha Putin zava-nampitsamboatra ny fiarahabana efa mahazatra fanao rehefa alina mialoha ny Taona Vaovao. Kabary roa samihafa no noraketin'i Putin — ny iray natao ho an'i Rosia any Extrême-Orient [ru], izay mankalaza ny Taona Vaovao ora iraikambinifolo mialoha ny ao Rosia Andrefana, toerana niantefan'ny kabary faharoa [ru].
Ny kabary voalohany dia tsy miresaka mihitsy ny fisian'ny fanafihana fampihorohoroana nitranga andro vitsy monja tany aloha ary nahafatesana olona 31 tao Volgograd [tatitry ny Global Voices]. Kanefa, tsy nataon'i Putin ihany koa ny nitanisa ireo tondradrano tamin'ny taona lasa nadravarava ny tao Extrême-Orient. Nahatezitra ny mpisera ireo fanadinoana ireo, ireo mpisera izay nihevitra fa angamba tsy fahampian'ny fahaiza-miserasera izany. Ity bitsika ity, ohatra, dia in-157 naverina nalefa:
— Brigita Grohman (@BrigitaGrohman) December 31, 2013
Ao anatin'ny kabary fiarahabana Taona Vaovao avy amin'i Putin, tsy nisy mihitsy filazàna momba an'i Volgograd, toerana izay nahazoany mpifidy 63,41% tamin'ny 4 Martsa 2012
Mpikirakira ny lahatsoratry ny Echo Moskvy no nanoratra mikasika ilay kabary voalohany [ru]:
Ilay kaondrana, toy ny hoe tsy nisy andiam-panafihana fampihorohoroana. Ny hany nolazainy dia ny fomba nampanan-karena an'i Rosia (IZY TENANY IHANY) tamin'ity taona ity.
Mba nalefadefaka ihany anefa ny sasantsasany. “old_den“ [ru] mpampiasa LiveJournal, dia nanamarina ny hoe tahàka ny efa fotoana ela talohan'ny Taona Vaovao no noraisina feo ilay kabary :
Nivazavaza sy tezitra mafy ny rehetra satria adinony ny niresaka ireo fanafihan'ny mpampihorohoro. …Efa iray volana izay no nandraisana feo ilay kabariny.
Na dia nisy tamin'ny olona ihany aza no nisalasala hoe mety hovàna ilay kabary fiarahabana ny Taona Vaovao, tsy ela dia nisy ny tatitra tonga milaza fisianà kabary iray faharoa, noraisina feo tao Khabarovsk, Siberia. Ity kabary ity no niresaka ireo fipoahana tao Volgograd sy ny tondradrano tany Extrême-Orient. Taoriana kelin'izay dia fantatra fa nisidina ho any Khabarovsk i Putin, hiaraka tamin'ny fianakaviana Bair Banzaraksaev, ilay lehilahy hany maty nandritry ny tondradrano, mba hiaraka hankalaza ny fandraisana Taona Vaovao miaraka amin'ireo tra-boinan'ny tondradrano.
Tao amin'ny TV-Rain, naneho hevitra mikasika ireo kabary roa ireo [ru] i Stanislav Belkovsky :
Raha tany aloha isika nanana ny Putin-Medvedev nifanohana, ankehitriny kosa hafa indray — Putin sy Putin. Ny Putin iray manao kabary iray, ny Putin iray hafa manao iray hafa koa. Manaporofo ny fikisahana amin-kery ataon'ny governenamanta mankany amin'ny rafitra roalela io
Etsy andaniny, i Eduard Limonov avy amin'ny “Rosia Hafa” dia nanontany tena [ru] ny amin'ny antony nisafidianan'i Putin an'i Khabarovsk fa tsy Volgograd:
Nahoana no nankany Khabarovsk, V(ladimir)V(ladimirovich)P(utin), izay efa adino ny fotoan-tsarotra tao fahiny? Hadisoana. Tokony ho nidina tao Volgograd. Ary namihina mafy ny havan'ireo niharan-doza
ireo bilaogera hafa dia nanakiana an'i Putin noho ny fandaniana nataony tamin'ny fisidinana nanerana ny firenena, ho fikatsahana fotsiny izay hanatsaratsaràny ny fijerin'ny olona azy:
Manontany tena aho hoe ohatrinona ny naloan'ny mpandoa hetra ho sandan'ny andro iray nitsangatsangan'ny Filoha Rosiana niala avy ao Maosko nankany Khabarovsk? Ho azy fotsiny dia solika 30 taonina no natsefotra…
Raha tonga amin'ny fiafaràny ny 2013, ny bilaogera sasany kosa niandry vasoka [ru] ny hisian'ny kabary fahatelo avy amin'i Putin, nanantenan'izy ireo fa mety mba haka teny avy ao anatin'ny bokin'i Boris Yeltsin izy:
Miandry kabary fahatelo izahay, miaraka amin'ny fibabohana hoe “Reraka aho, Hiala aho…”